Archive du 20200316
Fanoherana ny Tanamasoandro Nanatevin-daharana ny tolona Iarinarivo
Tonga nanatevin-daharana an’Anosibe zaivola, Ambohitrimanjaka, Ankadimanga sy Fiombonana ary Ambohidrapeto ihany koa ny sabotsy teo ireo mponina avy ao
Fanoherana ny fifidianana Manova paikady ny mpanohitra
Mitady hangingina sy takon’ny raharaha Coronavirus ny resaka olana ara-pifidianana taorian’ny fanambarana nataon’ny Filoha Lefitry ny CENI teo aloha Atoa Thierry Rakotonarivo.
Antenimierandoholona Andrimpanjakanan` ny fanoherana?
Inona tokoa moa no tena anton` ireny fitsiriahana fitaovam-piadiana teny amin` ny Antenimierandoholona ireny?
Raharaham-panjakana Tsy mandeha amin` izay laoniny
Raha ny zava-nisy tato ho ato dia manaratsy endrika ny fitondrana. Ohatra, ny fanendrena tsikelikely ireo governoram-paritra, ireo kara-panondrom-pirenena mitovy laharana araka ny nambaran` ny CENI,
Resaka fitsipaham-pitokisana Nifampibetroka ny minisitra sy ny depiote
Naharitra 10 ora be izao (4ora tolakandro ka hatramin’ny 1ora30 maraina) ny fifanazavana manodidina ny resaka fandriampahalemana teo amin’ireo depiote
Fifanitsana – CAN 2021 Tsy raikitra ny fihaonan’ny Barea sy ny Elefanta
24 ora taorian'ny famoahan'ny Minisitry ny tanora sy fanatanjahan-tena, Tinoka Roberto, tao amin'ny tambazotran-tseraserany fa ho fitsinjovana sy fiarovana ny
Orange Pro-League Malagasy Voatanan’ny Fca Ilakaka 0-0 ny Fosa Juniors Fc
Tontosa tany amin’ny kianja Rabemanjara Mahajanga omaly alahady 15 martsa 2020 ny lalao andro faha-2 tara eo amin’ny fifaninanana Orange Pro-League Malagasy 2019/2020.
Mpitahiry ny Hasimpiandrianan’i Madagasikara Miantso an’ireo raiamandreny ara-drazana hiady amin’ny coronavirus
Sarobidy ny aim-bahoaka, indrindra manoloana ireo valan’aretina samihafa miseho maneran-tany ka singanina amin’izany ny “coronavirus”. Fitsinjovana
Mihodinkodina amina lafin-javatra roa ny raharaham-pirenena, dia ny resaka olana tamin’ny fifidianana sy ny areti-mandripaka coronavirus.
Ahiana indray ny pesta 4 maty, 50 mahery arahi-maso
Olona miisa 4 no namoy ny ainy tany Anjoma Nandihizana any amin’ny Distrikan’i Manandriana ny herinandro lasa teo. Ny alatsinainy 9 martsa no nisy iray maty, raha ny fampitam-baovaon’ny Depioten’i Madagasikara voafidy tany
Coronavirus Miha miparitaka aty Afrika ihany koa
200 ankehitriny ny olona voamarina fa voan’ny Coronavirus aty Afrika ary 6 no . Taorian’i Kenya sy Ethiopie sy i Rwanda no firenena farany hatry ny omaly alahady fantatra fa misy olona tratry ny otrikaretina Covid 19;
Mpanjifa Malagasy Mila mahafantatra ny zony sy ny lalàna
Ny 15 martsa 2020 no andro maneran-tany ho an’ny zon’ny mpanjifa saingy ny sabotsy14 martsa 2020 lasa teo no nofidian’ny Minisiteran’ny Indostria,
Fitaovana misy “mercure” Tsy azo ampiasaina fa mahavoan’ny homamiadana
Tsy azo ampiasaina eto Madagasikara intsony ireo karazam-pitaovana ara-pahasalamana misy merikiora izay mahavoa ny homamiadana.
Tranon` ny mpanjifa 800 ireo fitarainana momba ny JIRAMA
Notokanana ny 22 novambra 2019 ny tranon’ny mpanjifa etsy Mahamasina izay mikendry ny hisolo tena ny mpanjifa sy hiaro ny tombotsoany eny amin’ny fitantanan-draharaha sy ny orinasa.
Ambohimanarina Voasambotra tao anaty kirihitr’ala ilay mpanolana
Lehilahy iray no tra-tehaky ny polisin'ny boriborintany fahaenina tetsy amin’ny faritra Fanambinana Ambohimanarina ny sabotsy 14 martsa lasa teo noho ny resaka fanolanana.
Mpivarotra eny Anosy Mahazo mivarotra fa tsy maintsy maka sisiny
Toy ny teny amin’ny Arcade Analakely dia nalana tamin’ny toerany daholo ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana teny amin’ny Instat Anosy sy ny manodidina nanomboka ny Alakamisy teo.
Fokontany besarety Trano maromaro no mety arodana
Trano maromaro no mety arodana ao amin’ny Fokontany Besarety, Boriborintany fahatelo, kaominina Antananarivo renivohitra. Voakasik’izany ireo trano miorina ambony lakan-drano.
Fiara Sprinter tsy nasiana « frein à main » 1 maty teo noho eo, 1 naratra
Zazalahy iray maty teo noho eo, iray hafa naratra sy nentina haingana namonjy hopitaly ny andron’ny sabotsy maraina lasa teo teny Ambohitrarahaba,
Fitrandrahana ao Ambatovy Hiala an-daharana ny Sherrit…
Nambaran’ny fampahalalam-baovao vahiny iray, fa hangoron’entana hiala ao Ambatovy ny orinasa Kanadianina Sherrit,